(၈) နှစ်လောက်နာနေတဲ့ ဒူးကို…. (၅)ရက်လောက် ဆေးစည်းလိုက်တာနဲ့…. ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့… ဆေးနည် – ရှအေလငျး
(၈) နှစ်လောက်နာနေတဲ့ ဒူးကို…. (၅)ရက်လောက် ဆေးစည်းလိုက်တာနဲ့…. ပျောက်ကင်းခဲ့တဲ့… ဆေးနည်
(၈) နှစ်ေ လာက် ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒူးနာရောဂါ ကို (၅)ရက်လောက် ကုလိုက်တာ သက်သာပျောက်ကင်းသွားတဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဒူးနာပျောက် ဆေးနည်းလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်
မင်္ဂ လာ ပါရှင် လက်တွေ့လေးမို့ မျှဝေပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အမေက ခုထိ ဒူးနာတာ ၈ နှစ်ပါ။
အ င်္ဂ လိပ် မြန်မာ ဆေးနည်းလည်းစုံနေတာပါ။ ပြောသမျှ ပျောက်နိုး ကောင်းနိုးရာရ လိုက်သုံးတာလည်းကြာ ခုထိလည်း မသက်သာ။
ငွေ လည်းမကုန် ဘေးထွက်လည်း မရှိတာမို့ ဘာကြောင့်နာနာ စမ်းသုံးကြည့်ပါလို့။
ဆေး နည်းကတော့ လက်ဖက်အသားအစိုနဲ့ ကျောက်ချဉ်ခဲကို ဆတူထောင်းပြီး နာနေတဲ့ ဒူးဂေါင်းမှာ စည်းပေးထားလိုက်ပါ။
(၈) နှဈလောကျ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒူးနာရောဂါ ကို (၅)ရကျလောကျ ကုလိုကျတာ သကျသာပြောကျကငျးသှားတဲ့ ဆိုတဲ့ ကိုယျတှေ့ ဒူးနာပြောကျ ဆေးနညျးလေး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ
သမီးလေးနဲ့ ပေးတွေ့ခွင့်ပေးတုန်းက တန်ဖိုးမထားခဲ့လို့ ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ပေးမတွေ့တော့ဘူးဆိုတဲ့ မျိုးစန္ဒီကျော်
ရည်းစားမရှိသေးတဲ့ သူတွေကို ..ဘ၀လက်တွဲဖော်ရှာပေးခဲ့တဲ့…ဘုရားကျောင်း
အင်ဒိုနီးရှား ငလျင်နဲ့ ဆူနာမီဘေးမှာ အရှင်လတ်လတ် မြေမြုပ်ခံရသူပေါင်း...